Samsung Galaxy S20 အသစ်အတွက်ကမ္ဘာ့အသစ်ထွက် Androidsis
Samsung ကသူ့ရဲ့ Galaxy S20 စီးရီးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ update အသစ်တစ်ခုကိုလွှတ်တင်လိုက်ပါတယ်
Samsung က အသစ်သော software ကို update ကို Galaxy S20, S20 Pro နှင့် S20 Ultra ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၎င်းသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဌာနများသို့တဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ရာသင့်အနေဖြင့်၎င်းကိုမရရှိပါကသင့်သက်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်တွင်ကြာမြင့်စွာမနေသင့်ပါ။
ဤ OTA အသစ်မှယူဆောင်လာသည့်အပြောင်းအလဲများကိုမဖော်ပြပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်များစွာသော bug fixes၊ system အတွက် stabilization နှင့်အမျိုးမျိုးသော optimization တို့ပါ ၀ င်သည်။ သေချာပါတယ်လူသိများသည်အခြားအရာသည် Android 2020 patch နဲ့အတူမတ်လ ၂၀ ရက်နေ့နှင့်ကိုက်ညီသည်။
Firmware အသစ်တွင် G98xFXXU1ATC1 နှင့်နံပါတ်ပါရှိသည် အလေးချိန်မှာ ၁၅၀ မီလီမီတာခန့်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ Galaxy S20 သို့ရောက်ရှိပြီးသားဟုတ်မဟုတ်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ မီနူးသို့သွားသည် ချိန်ညှိချက်များ> ဆော့ဝဲလ်အပ်ဒိတ်။ အောက်ဖော်ပြပါဤဖုန်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ပါ။
မတ်လ ၂၀၂၀ Galaxy S2020 စီးရီးအတွက် update
Galaxy S20 စီးရီးအချက်အလက်စာရင်း
မျက်နှာပြင် ၆.၂ လက်မ 3.200 Hz Dynamic AMOLED QHD + (1.440 x 6.2 pixels) ၆.၂ လက်မ 3.200 Hz Dynamic AMOLED QHD + (1.440 x 6.7 pixels) ၆.၂ လက်မ 3.200 Hz Dynamic AMOLED QHD + (1.440 x 6.9 pixels)
လုပ်ငန်းစဉ် Exynos 990 သို့မဟုတ် Snapdragon 865 Exynos 990 သို့မဟုတ် Snapdragon 865 Exynos 990 သို့မဟုတ် Snapdragon 865
ရမ် 8/12 GB ကို LPDDR5 8/12 GB ကို LPDDR5 12/16 GB ကို LPDDR5
ပြည်တွင်းသိုလှောင်မှု 128 GB ကို UFS 3.0 128 / 512 GB UFS 3.0 128 / 512 GB UFS 3.0
နောက်ဘက်ကင်မရာ Main 12 MP Main + 64 MP Telephoto + 12 MP Wide Angle Main 12 MP Main + 64 MP Telephoto + 12 MP Wide Angle + TOF Sensor 108 MP အဓိက + 48 MP တယ်လီဖုန်း + 12 MP အကျယ်ထောင့် + TOF အာရုံခံကိရိယာ
ရှေ့ကင်မရာ ၃၂ MP (စ / ၂.၀) ၃၂ MP (စ / ၂.၀) 40 အမတ်
OS One UI 10 ပါသော Android 2.0 One UI 10 ပါသော Android 2.0 One UI 10 ပါသော Android 2.0
ဘက်ထရီ ၃,၄၀၀ mAh သည်မြန်ပြီးကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် ၃,၄၀၀ mAh သည်မြန်ပြီးကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် ၃,၄၀၀ mAh သည်မြန်ပြီးကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
ချိတ်ဆက်မှု 5G ။ Bluetooth 5.0 ။ Wifi 6. USB-C 5G ။ Bluetooth 5.0 ။ Wifi 6. USB-C 5G ။ Bluetooth 5.0 ။ Wifi 6. USB-C
ရေစိုခံ IP68 IP68 IP68
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung ကသူ့ရဲ့ Galaxy S20 စီးရီးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ update အသစ်တစ်ခုကိုလွှတ်တင်လိုက်ပါတယ်
Huawei ၏အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းအသစ်သည် TENAA အသိအမှတ်ပြုထားပြီးစျေးကွက်သို့နီးကပ်လာသည်
Meizu 17 လွှတ်ပေးမှုကိုforပြီလတွင်အတည်ပြုခဲ့သည်